Uhlelo lokusebenza lwe-Expekt
Uhlelo lokusebenza lweBetano
Uhlelo lokusebenza lwe-Betfair
Uhlelo lokusebenza lwe-Xtip
Ngenisa Uhlelo Lokusebenza
NeBet-at-Home sinomunye umhlinzeki wase-Austrian ekuqaleni, okususelwa futhi kulayisensi eMalta. Umhlinzeki kusukela 1999 usebhizinisini- yokuzama, UBwin uthole iminyaka yokuphumelela ngosayizi nokubonakala komkhakha esikhathini esedlule, ikakhulukazi ngenxa yemikhankaso yokuthengisa eyeqisayo.
Njengamanje eBet-Ekhaya-Amakhaya angaphezu kwezigidi ezine ngamakhasimende angaphezu kwesigidi 270 Abasebenzi, futhi inikeza abathengi bayo amabhonasi amasha ajabulisayo. Kepha iBetmaster Cup kanye nokubheja kwezemidlalo ezinkulu kunikeza izizathu zokuma ngeBet-at-Home. Ukubheja kuthakazelisa kakhulu kubo ngangokunokwenzeka, Namathisela ukubaluleka kokunyuswa kwensizakalo yamakhasimende ethandekayo nenhle.
INDLELA YOKUZIPHATHA NGOKUGCINA: LAPHA LAPHA LIYOBUZA LAPHA
Ungasho ngeBet-at-Home, ufunani, kepha ukubheja kwezemidlalo ukubheja okuhle kuqhathaniswa neBwin noma iBwin. Cishe 25 Ukuthola ezemidlalo nokho, hhayi ibhola elihlala njalo lapha, Ibhola lezandla neqhwa kungokwalabo. nezindawo ezinjenge-cycling, Umbukiso wezokulwa, Ithenisi edlalwa etafuleni, Imicimbi yenhlangano, njenge imibukiso ye-TV ethandwayo kanye nokubhejela okuvaliwe kwe-e. Isithasiselo Esiyintandokazi Kwezemidlalo Germany – INkosi yeBhola – ikakhulukazi ekuxhaseni amaqembu amabili aziwa kuqala eSchalke 04 noHertha BSC Berlin, ngokusobala.
E-bookbook yebhola isebenza kakhulu kunesilinganiso, ngenkathi unikeza imidlalo efana nokubheja kwiligi, ISchleswig-Holstein League noma iBayer League, okuvame ukutholakala cishe kuyo yonke indawo.
ukubheja ekhaya nemibono: Umhlinzeki wokubheja uthole isilinganiso samaphuzu angama-93/100 esivivinyweni
Ekubuyekezweni okuningiliziwe, ukubheja kwasekhaya kuyalandela, sathatha ukubheja kweJalimane-Austria eduze kwesikhangiso. Indaba kaBet-at-Home yaqala 1999, lapho ababili base-Upper Austria Jochen Dickinger noFranz Ömer basungula le nkampani eWels. I-Online Bet-at-Home selokhu kwaqala inkulungwane yeminyaka. Kusukela lapho, indlela ikhuphukile abahlinzeki ngokubheja.
Umhlinzeki we-inthanethi wamakhasimende abhaliswe ngaphezu kwezigidi ezine manje useyakwazi ukukhombisa, ngokugxila ngokucacile esifundeni esiseYurophu Ephakathi. Gqugquzela umzamo omncane wokwenza ama-bookies ephephile angajwayelekile aphindwe phambilini. IBet-at-Home ikwazile ukubhaka ekhanda labathengi bezemidlalo. Ukuqabula isithandwa sebhola laseJalimane nase-Austria yisibonelo. Umpetha webhola laseYurophu kulo nyaka 2012 yayihambisana nonodoli waseBet-at-Home voodoo.
Ekubuyekezweni okulandelayo, noma kunjalo, izimfanelo ezisebenzayo zeBet-at-Home kufanele zihambe. nikeza ukubheja oku-inthanethi ekuqaleni? Yiliphi ikhwalithi yensizakalo enikezwa yinkampani? Indlela iBet-at-Home Bonus yenzelwe amakhasimende amasha? Lokho kungukuhlangenwe nakho kwethu kuzo zonke lezi zinkinga ezihlobene nokuhlolwa okujulile.
Ukunikezwa kokubheja - Kuqondiswe kwisidlali sokuzijabulisa
Uhlelo lokubheja oluhambisana nezidingo zamakhasimende ku-Central Europe. Sekukonke phatha i-Bet-at-Home set 25 Ezemidlalo esibukweni. Ukuhlanganiswa okuhle kwezifiso ezahlukahlukene ukunikezela. Kakhulu, kodwa-ke, i-Bookie ayibekwanga kahle. Kukhona amabhidi ambalwa ezigabeni eziningi, ngakho-ke dass die Bet-at-home, asevele enenkinga, Ngaphezu kwe 10.000 Ukubheja okukodwa ngosuku ekuqaleni. Dominates izinhlobo ezejwayelekile zemidlalo enkulu ngebhola ne-tennis ngokucacileyo. IHockey ukubheja okuqinile kakhulu. Umholi wemakethe eRiss Sprinter Bet-at-Home namuhla. Njengengxenye yephothifoliyo, Iziyalo ezifana ne-lacrosse, I-hockey yasemgwaqweni noma inkambo yegalufu futhi. Endaweni yokuphuculwa kokubhejwa okukhethekile ezinyangeni ezisanda kubonakala kubonakala kahle. Cishe 70 Ukubheja okhethekile ngomdlalo ngamunye kulezinkundla ezinkulu zebhola uCartie wafika phakathi kwesiqhathaniso sokuhlinzeka ngokubheja.
Uhlelo olusha lwe-Mediocre
Kungezwe abathengi abasha eBet-ekhaya ngebhonasi ye 50% kuya ku 100 Yamukelwe i-Euro. Akukho diphozithi eliphansi kwimigomo nemibandela ejwayelekile, kodwa inani elincane lama-euro ayishumi ekusebenzeni kubonakala ngathi uyahlanya kithi. Amakhasimende, okuthiwa luthuli olukhulu kakhulu lwamanani we-premium, kumele kuqala 200 Idiphozithi yama-euro. Kulokhu, injabulo yokubheja iqala ngesikweletu se 300 Euro. Ukwenza kusebenze kwenzeka endaweni yokugcina izivakashi engabingelela abadlali ngokufaka ikhodi "Kuqala". Lokhu kumele kwenziwe kungakapheli izinsuku eziyishumi ukubhaliswa.
Bona i-rollover ngemuva kokuthengisa amahlandla amane imali eyakho nenombolo yamabhonasi ngaphambili, Ngaphambi kokuwina ukuhoxiswa kufanele ufake isicelo. Ngesikhathi samahhala inani eliyisilinganiso elincane liyajika 1,7, khona-ke ukubheja okuningi okuningana kubhekiselwa kuyo. Izidingo zokubheja kufanele zifezekiswe kungakapheli izinyanga ezintathu.
I-Bonus Bet-at-Home isebenza kuphela ekubetheni kwezemidlalo futhi ayikwazi ukudluliselwa endaweni yekhasino noma poker.
Previous Previous post: Uhlelo lokusebenza lwe-Betfair
Next Next post: Uhlelo lokusebenza lweBetano